Nangu umfana wami – Doctor Khumalo | isiZulu
Nangu umfana wami – Doctor Khumalo
Owayedlalela iBafana Bafana, uDoctor Khumalo nomndeni wakhe. (Dino Codevilla, Drum)
Ngu-Theo Nyhaba, Drum
Johannesburg - Ugqoke amajini amhlophe ambambayo kanti ubukeka emuhle njengemodeli esanda kwehla esiteji, okuyinto engekude naye njengoba ezinsukwini ezi-mbalwa usanda kulontsha ilebula lakhe lezingubo zokugqoka eNamibia.
UBlanche, unkosikazi wobengumpetha wezebhola uDoctor Khumalo asebeshade iminyaka emihlanu, usanda kubuya emva kokwambula ilebula lakhe lezingubo zokugqoka, iBlanchero, ezweni lakubo azalwa kulo kanti labo phathina kuyacaca ukuba basayizwa imithelela yezinhlelo zabo ezimatasa. Kodwa njengamaphrofeshinali bazimisele ukugxila ekuthwetshulweni ikhava bendawonye njengomndeni.
Yize kunjalo indodana yabo eneminyaka emithathu ubudala, uDiego, weqa amajikijolo ngenkathi egijigijima engadini ecwalwe kahle yaseMarion on Nicol Boutique Hotel eseGoli – okuyindawo abazothwebulela kuyo izithombe.
"Baba, baba, woza uzobheka idamu lamanzi," kusho uDiego ememeza uyise. "Ngingagqumela phakathi kulo?" "Cha, zama ukungazingcolisi," kusho uDoctor ona-44 ubudala noye wamthengela i-ice-cream esikhundleni salokho.